Labo ka mid ah xiddigaha Manchester United oo Tababarka Kooxda dib ugu soo laabtay… (Waa kuwee?) – Gool FM
Labo ka mid ah xiddigaha Manchester United oo Tababarka Kooxda dib ugu soo laabtay… (Waa kuwee?)
(Manchester) 07 Sebt 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa heshay dhiiri-gelin weyn kaddib markii xiddigaha Scott McTominay iyo Alex Telles ay tababarka ku soo laabanayaan.
Labada Laacib ayaa lagu sawiray xerada Tababarka Carrington Isniintii shalay ka hor kulanka Horyaalka Premier League ee ay Sabtida soo aaddan la ciyaari doonaan Naadiga Newcastle.
McTominay oo 24-sano jir ah ayaa dhawaan maray qalliin gumaarka ah, laakiin wuxuu wacad ku maray inuu dib ugu soo laaban doono garoommada ka hor inta aan dib loo bilaabin jadwalka horyaalka Premier League kaddib ciyaaraha caalamiga ah, wuxuuna tababarka kula biiray saaxiibadiisa Man Utd.
Dhinaca kale difaaca dadabka bidix ee Telles oo 28 jir ah ayaa dhaawac ka soo gaaray canqowga xilli ciyaareedkii hore, mana uusan ciyaarin tan iyo markaas, laakiin wuxuu u muuqdaa inuu ku soo laabanayo waddadii uu si buuxda ugu soo kaban lahaa.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Man United ayaa tiri: ‘Waa la arki doonnaa’, haddii labadaan xiddig ay taam u noqon doonaan inay todobaadka soo socda garoonka Old Trafford ku wajahaan Magpies-ka.
McTominay wuxuu u badan yahay inuu ku bilaawdo sidii mid ka mid ah labada xiddig ee khadka dhexe, inkastoo Telles uu hadda ka dambeeyo Luke Shaw oo sida ugu sarreysa u ciyaaraya, haddana wuxuu Shaw geliyey tartan ay aad ugu baahan tahay Man United.
Goolhaye Dean Henderson iyo daafaca dambeedka ah ee Teden Mengi ayaa ka soo muuqday tababarka markii ay ka soo laabteen dhaawacyo, iyadoo labada ciyaaryahan ee Koonfurta Ameerika ee Fred iyo Edinson Cavani ay sidoo kale joogeen Tababarka.
Red Devils ayaa rajeynaysa in saxiixa xagaaga ee 73 milyan oo gini ugu fadhiya ee Jadon Sancho uu ka soo laaban doono dhaawac yar oo ka soo gaaray waajibaadka xulkiisa England.
Dhinaca kale Cristiano Ronaldo ayaa weli karantiil ku jira kaddib markii uu ka yimid Waddankiisa Portugal, laakiin wuxuu u tartamayaa inuu kulankiisii ugu horreeyey u safto kooxda Tababare Ole Gunnar Solskjaer, waxaana la filayaa inuu tababarka Man Utd ku soo biri doono Khamiista soo aaddan.
Wakiilka Jorginho oo ka nixiyay taageerayaasha Chelsea kaddib markii uu ka hadlay qorshaha mustaqbalka ee laacibka